Dhirta hawada nadiifisa: noocyada ugu wanaagsan | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 13/04/2022 12:00 | Hoyga Cagaaran
Hawada guryaheena iyo goobaha shaqada waa ka sii daraysaa. Waa hab-nololeedkeenna tan keentay in tirada sii kordheysa ee alaabooyinka kiimikaad lagu farsameeyay guryaheenna ay sii daayaan uruurinta isku-dhisyada organic-ga ah ee kacsan ee waxyeellada u leh caafimaadka. Kuwa ugu badan waa: formaldehyde, trichlorethylene, benzene, xylene, toluene, carbon dioxide iyo ammonia, qaar iyaga ka mid ah oo leh saameyn la xaqiijiyay kansarka. Si wax looga qabto xaaladdan, waxaa jira kala duwanaansho dhirta hawada nadiifisa.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa dhirta ugu muhiimsan ee hawada nadiifisa iyo sida ay kaaga faa'iidaysan karaan.
1 Faa'iidooyinka dhirta ee nadiifiya hawada
2 dhirta hawada nadiifisa
2.2 areca timireed
2.3 carab shabeel
2.6 ficus adag
2.7 geed timireedka Shiinaha
2.8 Jirida Brazil
2.9 Ingiriisi ivy
3 Geedka timirta baasaboorka
Faa'iidooyinka dhirta ee nadiifiya hawada
Dhirtu waxay guriga ku leedahay faa'iidooyin badan. Marka laga soo tago in ay u dhaqmaan sida nadiifiyeyaasha hawada dabiiciga ah xaaladaha qaarkood, sidoo kale waxay yareeyaan qaylada, wanaajiya niyadda waxayna nadiifiyaan deegaanka. Xusuusnow inta lagu jiro photosynthesis, dhirtu waxay ka soo qaadaa kaarboon dioxide deegaanka waxayna u beddeshaa ogsijiin, taas oo lagama maarmaan u ah neefsiga aadanaha.
Qaarkood ayaa ka faa'iido badan kuwa kale marka ay timaado nadiifinta deegaanka iyo sifeynta wasakhowga. NASA waxay samaysay daraasad cilmiyeed dhamaadkii 1980-meeyadii, NASA Daraasada Hawada Nadiifinta, si loo go'aamiyo kuwa ugu waxtarka badan arrintan. Cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen liiska 20 dhirta nadiifinta kuwaas oo si gaar ah faa'iido u leh nadiifinta hawada meelaha xiran.
Qoraaga hormoodka ah ee daraasadda, Bill Wolverton, waa saynisyahan Mareykan ah oo ku takhasusay kimistariga, microbiology, biochemistry, iyo injineernimada deegaanka. Waxa uu go'aamiyay in shan ka mid ah dhirtaas ay yihiin kuwa ugu fiican ee la heli karo iyo waxtarka. Liistada ay ku sharaxday Wolverton ee warbaahinta kala duwan ayaa wali sax ah oo xiiso leh, dhirtani waxay ka saari karaan walxaha waxyeelada leh hawada sida formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide ama trichloroethyl.
Waa mid ka mid ah dhirta ugu nadiifinta badan waana mid ka mid ah kuwa ugu fudud in la ilaaliyo. Gelida warshadan gurigeena waxay yaraynaysaa iskudhisyada organic-ga ah sida formaldehyde, xylene iyo toluene, kuwaas oo waxay waxyeello u geystaan ​​caafimaadka, waxayna sidoo kale waxtar u leedahay ka saarista acetone, trichlorethylene iyo benzene.
Waxay u dhalatay kaymaha kulaylaha ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, waxay u baahan tahay meel leh iftiin aan toos ahayn, inkasta oo ay jeceshahay huurka, haddana marar dhif ah ayaa la waraabiyaa, musqul leh iftiin dabiici ah ayaa ah meel ku habboon geedkan.
Mid ka mid ah dhirta sifaynta hawada ugu fiican guud ahaan. Waxaa lagu yaqaan isticmaalka gudaha. Geedkan timirta ah ayaa si fudud loogu arki karaa qurxinta Fiktooriya iyo filimada xilliyada. Sababta ayaa ah in ay si farxad leh ugu nooshahay gudaha gudaha iyada oo aan loo baahnayn qorrax toos ah. Waxaa dheer, waxaa jira daryeel aad u yar oo loo baahan yahay si loogu hayo xaalad sare. Geedkan timireed waxa uu u dhashay Madagascar. Laakin maanta waa aduunka oo dhan. Las Palmas waxay ku takhasustay saarista formaldehyde, benzene, iyo carbon monoxide (gaar ahaan waxtar haddii qof gurigaaga jooga uu sigaar cabbo).
Waxaa loo isticmaalaa in lagu nuugo oxides nitrogen iyo formaldehyde. Waa mid ka mid ah dhirta guriga ee ugu adkeysi badan. Loo yaqaan inaan la dumin karin. Waxay u adkaysatay jawiga kulul, qallalan ee qolka, iftiin yar, waraabin la dayacay, sanado aan dib loo dhigin, cayayaanka iyo cudurrada, wax walba.
Waa tan ugu fudud in la ilaaliyo. Waxay leedahay caleemo dahab ah oo qaabka wadnaha ah waxayna caan ku tahay Waqooyiga Ameerika. Waa geed adag waxay ku noolaan kartaa iftiin hooseeya iyo heerkul qabow, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon xafiisyada iyo guryaha marka ay hawada ku sii deyso carbon monoxide iyo formaldehyde. Aad bey u adkeyd oo dhaqso u kortaa. Guriga, waxay door bidaa iftiin aan toos ahayn oo dhalaalaya iyo ciidda qoyan. Ku fiican suuliga ama jikada.
Waxay tirtirtaa carbon monoxide iyo sunta kale iyo wasakhda. Waa mid ka mid ah saddexda dhir ee ugu sarreeya ee hawada laga saaro formaldehyde. Way fududahay in la daryeelo iyo heerkulka saxda ah, waraabinta iyo iftiinka, dhirtaadu waxay noolaan doonaan sanado badan.
Waxay u dulqaadataa iftiin hooseeya iyo si fiican qabow. Waxay u adkaystaan ​​abaarta oo ma dhiman doonaan hadday illoobaan inay biyaha illoobaan sababtoo ah waxay kaydiyaan biyaha xididkooda.
Waa nooc weligood cagaar ah oo ka mid ah genus Ficus oo u dhashay waqooyi-bari Hindiya (Assam), koonfurta Indonesia (Sumatra iyo Java). Waxaa loo soo bandhigay Yurub 1815 sidii guri-guri ahaan. Mid ka mid ah kuwa ugu fudud in la ilaaliyo. Gelida geedkan gurigeena waxa ay yaraynaysaa formaldehyde, oo ah iskudhis noole organic ah oo waxyeello u leh caafimaadka.
geed timireedka Shiinaha
Raphis excelsa waa timir dheri leh oo qurxoon oo ay fududahay in la daryeelo oo aan u baahnayn iftiin badan. Raphis excelsa, oo sidoo kale loo yaqaan cawska cirbadda dahabka ah ee Shiinaha, Waxay leedahay daraasiin noocyo ah oo dhererkoodu yahay hal mitir iyo badh. Waxay yaraynaysaa formaldehyde iyo benzene, xeryahooda organic kacsan ee waxyeelada u leh caafimaadka.
Magaceeda sayniska waa Dracaena waxaana iska leh qoyska agave. Waxay ka timid Ameerika kulaylaha waana geed weligood cagaar ah. Waxa lagu gartaa jirid bunni khafiif ah oo ka kooban siddooyin siman. Caleemuhu waa soo laalaadaan, qaabaysan yihiin lance, waxayna u taagan yihiin midabkooda cagaarka ah ee dhalaalaya iyo xariijimaha jaalaha ah ee dhex mara.
Ubaxyadani waxay ka soo baxaan oo keliya muunado qaangaar ah oo gaadha dherer gaar ah (badanaa laba mitir) oo u taagan caraftooda sakhradda. Waxay u egtahay inay ubaxu si aan badnayn waxayna yaraynaysaa isku dhafka dabiiciga ah ee kacsan sida trichlorethylene iyo xylene, kuwaas oo waxyeelo u leh caafimaadka.
Waa geed fuulitaan caadi ah oo dhowr mitir ka kor mari kara dhulka, wuxuuna kori karaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo oog, sida geedaha, dhagxaanta, darbiyada. Ururinta caleemaha iyo afkoda waxaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah, in kastoo ay fiican tahay in la sameeyo ka hor ubax. Waxay yaraynaysaa isku dhafka dabiiciga ah ee kacsan ee waxyeelada u leh caafimaadka, sida formaldehyde, trichlorethylene iyo benzene. Geedka canabka ah ayaa aad u adag in la koro, waxa uu doorbidaa qabow iyo qoyaan, waxaana lagu hayn karaa dheryaha balakoonka.
Geedka timirta baasaboorka
Wuxuu u shaqeeyaa sida humidifier dabiici ah. Waa geed ka soo jeeda Shiinaha oo lagu beeray adduunka oo dhan. Hadda waxa loo isticmaali karaa qayb ka mid ah qurxinta guryaha, jardiinooyinka iyo barxadaha. Sababo la xiriira sifooyinka gaarka ah, waa warshad u baahan dayactir yar.
Waxay ka saartaa benzene, formaldehyde iyo trichlorethylene. Geedkan aadka loo jecel yahay waxa uu ku soo baxaa xaalad iftiin yar oo aan u baahnayn waraabin badan, taas oo ka dhigaysa mid ku haboon kuwa inta badan iloobaan waraabinta dhirtooda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto dhirta hawada nadiifisa iyo faa'iidooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » dhirta hawada nadiifisa